Inona no tokony ho fitaizana zaza hypersensitive | Bezzia
Inona no tokony ho fitaizana ny zaza hypersensitive
Maria Jose Roldan | 07/01/2022 22:40 | Ampianaro ny ankizy
Ny fahatsapana dia zavatra voajanahary ao amin'ny olombelona. Na izany aza, mety hitranga fa misy ny olona izay mibaribary kokoa noho ny hafa ny fahatsapana toy izany. Ho an'ny ankizy, ny hypersensitivity voalaza etsy ambony dia tena fanamby ho an'ny ray aman-dreny maro.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasehontsika anao izay tokony hataon'ny ray aman-dreny, raha hitany fa ny zanany dia manana ambaratonga ambony kokoa noho ny an'ny ankizy hafa.
1 Ireo singa izay tokony hotadidin'ny ray aman-dreny manan-janaka saro-pady
2 Ahoana no ahafantarana raha hypersensitive ny zaza
3 Ahoana ny fomba fitaizana zaza hypersensitive
Ireo singa izay tokony hotadidin'ny ray aman-dreny manan-janaka saro-pady
Ny zaza hypersensitive dia haneho fiheverana lehibe amin'ny antsipiriany rehetra sy ny zavatra kely manodidina ny tontolo iainany. Manoloana izany dia tokony handinika ny fitaizana ny zanany ny ray aman-dreny amin'ny fomba fijery hafa tanteraka amin'ny ankizy sisa.
Raha ny ankizy hypersensitive, tena ilaina sy tena ilaina ny fitantanana ny fihetseham-po. Ity fitantanana ity dia ahafahan'ilay zaza resahina mba tsy hijaly amin'ny aretina sasany toy ny fahaketrahana.
Ahoana no ahafantarana raha hypersensitive ny zaza
Misy lafin-javatra maromaro milaza fa ny zaza dia saro-pady kokoa noho ny mahazatra:
Izany dia momba ny ankizy izay tena misintona sy saro-kenatra.
Mampitombo ny fiaraha-miory izy ireo mihoatra ny mahazatra.
Manana fotoana sarotra izy ireo miaraka amin'ny fanentanana mahery vaika toy ny fofona na feo.
Matetika izy ireo no milalao Mitokana.
Manana haavo ara-pihetseham-po ambony izy ireo amin'ny lafiny rehetra.
Mikasika ny ankizy izany tena mamorona.
mampiseho tena manohana sy malala-tanana miaraka amin’ny ankizy hafa.
Ahoana ny fomba fitaizana zaza hypersensitive
Ny fitaizana zaza saro-pady indrindra dia tokony hifototra indrindra amin’ny fampianarana azy hitantana ny fihetseham-pony rehetra. Mba hanaovana izany, ny ray aman-dreny dia tsy maintsy manaraka toromarika na torohevitra maromaro:
Tena ilaina ny mahatsapa fa tohanan'ny ray aman-dreniny ilay zaza tsy ampy taona. Mora kokoa ny fitaizana na ny fanabeazana raha toa ka manana fahatokiana sy fahatokian-tena lehibe ilay zaza.
Ny fitiavana sy ny firaiketam-pon'ny ray aman-dreny dia tsy maintsy mitohy. Avy amin'ny oroka ka hatramin'ny fihina, Na inona na inona mandeha raha mbola mahatsiaro ho tiana ilay zaza tsy ampy taona.
Ny fihetseham-po sy ny fihetseham-po dia tsy maintsy aseho amin'ny fotoana rehetra. Tokony haneho ny fihetseham-pony ny ray aman-dreny ka ny fitantanana ara-pihetseham-po no tsara indrindra.
Toy izany koa, ny ray aman-dreny dia tokony ho tompon’andraikitra amin’ny fanampiana ny zanany hahafantatra ny fomba hanehoana izay tena tsapany. Tsy maintsy mivoaka ny fihetseham-po ary ialao ny olana ara-pihetseham-po mety hitranga toy ny fanahiana.
Ny fahaizana mihaino no lafiny iray lehibe amin’ny fitaizana tsara ny zaza saro-pady. Ity fihainoana ity dia fanalahidy mba hahatsapany fa takatra sy tiana amin'ny fotoana rehetra izy ireo.
Raha fintinina, Ny fananana zaza hypersensitive dia tsy ny fiafaran'izao tontolo izao ho an'ny ray aman-dreny rehetra. Zaza miombom-pihetseham-po mihoatra noho ny hafa izy ary afaka mahatsapa mafy ny fihetseham-pony rehetra. Noho izany, ny fitaizana dia tsy maintsy manaraka toromarika maromaro izay ahafahan'ny ankizy mahafantatra ny fomba fitantanana sy fampitana ny fihetseham-pony rehetra amin'ny fomba tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » RENY » Ampianaro ny ankizy » Inona no tokony ho fitaizana ny zaza hypersensitive
Ny toekarena boribory sy ny maha zava-dehibe ny tontolo iainana
Aforitra fanaka mba handravaka tena kely lavarangana